Waxa loo baahan yahay in tijaabo la iska qaado/la iska baadho si loogu ogaado inaad covid-19 qabtid iyo inkale. Shaybaadhka iyo tijaabadu waa isku mid. Tijaabo iska qaad haddii aad calaamado leedahay.
Ku soo-dhowoow iska tallaal cudurka [Covid-19]!
Välkommen att vaccinera dig mot covid-19! - somaliska
Cudurka [Covid-19] waa cudur aad halis u ah, waxaana dartiisa u dhinteen ku dhowaad 4.5 maljan qof oo adduunwaynaha ku nool. Tirada daka ku nool dalka Iswiidan ee cudurka dartiisa u dhintay qiyaastii waa 15 000. Cudurka [Covid-19] wuxuu xitaa si xun ugu dhici karaa da`yarta, wuxuuna sababi karaa dhibaato caafimaadeed xitaa kaddib markii qofku u cudurka ka bogsado.